Vahaolana Smart Home ho an'ny olon-drehetra - zavatra 13 afaka mandeha ho azy. Smart home - ahoana no hatao? - SmartMe
Smart Home ho an'ny olon-drehetra - zavatra 13 afaka mandeha ho azy
9 Febroary 2020
trano hendry, manan-tsaina an-trano
Rehefa manomana ny tokantranonao manan-tsaina izahay, ny zava-dehibe indrindra dia ny famaritana izay ilainay. Avy eo isika manontany tena ny tenantsika fototra - inona no azontsika ampiharina amin'ny karazana teknolojia?
Azontsika atao ny manomboka mampiasa fitaovana avy amin'ny mpanamboatra iray, avy eo dia mora kokoa ny manamboatra sy automatique, fa mametra antsika kosa raha ny isan'ny isan'ny vokatra. Ny safidy hafa dia ny fanamorana vahaolana an-trano matotra, toy ny Home Assistant, Domoticz na Open Hub, izay manolotra fampidirana vokatra avy amin'ireo mpanamboatra maro samihafa, saingy mitaky fotoana bebe kokoa ho anay.
Matetika isika dia mahazo fanontaniana momba ny vokatra isan-karazany izay mamolavola ny trano marani-tsaina izay mety ho automate. Nanapa-kevitra àry izahay fa hanao lisitra. Ity lisitry ny vahaolana an-trano mahay ity dia ho lava lava, ka zaraintsika ho ampahany. Ankehitriny izahay dia mamoaka ny fametrahana voalohany azy.
Inona no azontsika ovaina mba hamoronana trano hendry:
Fahazavana - afaka ataontsika automatique ireo:
1.1. Rehefa mividy rafi-jiro manan-tsaina - jiro na jiro LED izay ho "hendry" saika ivelan'ny boaty. Ohatra iray amin'izany i Philips Hue na i Yeelight.
1.2. Amin'ny fividianana mpamily ho an'ny kofehy, izay mifono vilia. Avy eo isika dia afaka manao izay manam-pahaizana hazavana amin'ny vidiny mora kokoa. Ohatra ireo fitaovana ZAMEL, Sonoff, Shelly, Fibaro.
2. Fanairana - afaka mampiditra ny fanairana isika mba hiseho amin'ny fitaovantsika hafa amin'ny efijery iraisana. Ny vahaolana iray dia ny rafitra Satel Integra miaraka amin'ny module ETH-1 tohanan'ny Mpanampy an-trano. Ireo fitaovana manan-tsaina izay ahafahana mifehy ireo singa isan-karazany ao an-trano hendry.
3. Sensors - afaka mametraka sensor maro ao an-trano isika. Sensors ho an'ny rano tondraka, setroka, entona, karbonina monoxide, ny fanovana ny toerana. Ireo sensor ireo dia mampahafantatra antsika fa misy zavatra tsy mety. Rehefa mahita fandrahonana izy ireo dia mampandre anay avy hatrany. Ny sensor toy izany dia mety ho avy amin'ny Aqara, Fibaro na mpanamboatra hafa.
4. Ireo mpifamadika volotara sy tsindrona kilema - ireo sensor ihany koa, saingy manana fampiharana lehibe kokoa. Azo ampiasaina ho toy ny singa fanairana izy ireo (nahita ilay zavatra ny sensor) ary toy ny singa manaparitaka ny automation. Miditra ao an-trano izahay, nafahana ny lalam-barotra ary efa manomboka ny fanadiovana. Na hiditra ny efitrano isika dia efa nisy ny hetsika, nivadika ny jiro. Ny sensor toy izany dia mety ho avy amin'ny Aqara, Fibaro na mpanamboatra hafa.
5. Ireo mpitantana ny jamba mihodinkodina - mamela ny mpanodina jamba mihetsika izahay. Misaotra an'izany, azontsika atao, ohatra, "manakatona" ny trano manontolo na jamba ambany raha mijery horonantsary. Ny mpanamboatra rafi-pitaterana dia misy Zamel, Shelly ary Fibaro.
6. Sensor amin'ny hafanana sy ny hamandoana, PM 2.5 - ity karazana sensor ity dia mampahafantatra antsika ny momba ny toetran'ny toetran'ny tsirairay ao an-tranonay. Azontsika atao ny mahafantatra ny mari-pana, ny fitambaran'ny isan-jatony ary ny fitrandrahana PM 2.5. Ity dia mety mitarika, ohatra, ny fampahavitrihana ny fanadiovana, na fanamandoana, izay manatsara ny kalitaon'ny rivotra, ary toy izany koa ny fampiononana amin'ny fiainana. Ny sensor toy izany dia mety ho avy amin'ny Aqara na Xiaomi.
7. Sady maranitra - sady maranitra mamela antsika hanao automatique fitaovana tsy misy asa marani-tsaina, toy ny fahitalavitra na kettle taloha. Azontsika atao ny mamadika na mamono azy io haingana ary mandinika ny fanjifana angovo. Ohatra amin'ireo lakandrano dia Xiaomi, Aqara, Fibaro, Smart DGM. Ny vahaolana an-trano azo ampiasaina tsy ho fanamorana, fa koa ho an'ny ekolojia sy tahiry.
8. Ny fifehezana famahana - amin`ity tranga ity, dia afaka mifehy tsara ny hafanana isika, na ambanin`ny fanamainty na ny radiatera mahazatra. Noho izany dia afaka mifehy tsara ny mari-pana ao amin'ny trano fonenantsika izahay. Ohatra amin'ireo mpanamboatra izay manome ny rafitra fitaovana ilaina amin'izany dia Tado, Netatmo, Honeywell, Fibaro.
9. Ny fifehezana ny vavahady - amin'ny maha-vahaolana an'ity vahaolana ity, amin'ny alàlan'ny fanamboarana tsara ny fisie ao amin'ny fampiharana finday, azontsika atao ny mifehy ny vavahady fidirana na vavahadin'ny garage. Ny mpamokatra vokatra toy izany dia ankoatra ny hafa Zamel sy Nice.
10. Ny fifandraisana an-tsary amin'ny finday - raha tiantsika ny hahita an'izay tonga teto amintsika, dia afaka manao izany isika noho ny intercoms an-tsary mahay. Ohatra iray i Nice.
11. Ny varavarana fanidiana varavarana - raha te-hanokatra tsara ny varavarantsika isika, dia afaka mametraka lakile manan-tsaina izay misy vavahadin-tsolika ary namboarina miaraka amin'ny fanampian'ny fampiharana. Ny mpanamboatra an'io karazana vokatra io dia Aqara, Gerda na Aogositra. Misaotra an'izany, tsy mila mampiditra ianao na mamadika ny lakile hanokatra varavarana.
12. Robots - koa ny vakoka na fanaratsiana robots dia afaka mifandray amin'ny automation. Azontsika atao miaraka amin'ny robina iRobot, Roborock, Xiaomi na Viomi.
13. Ireo mpanadio sy ny humidifiers - ity fizarana ity dia afaka mifandray ihany koa amin'ny tranontsika manan-tsaina. Fitaovana toy izany dia azo jerena ao amin'ny tolotra Xiaomi, Philips, Samsung na Sharp. Satria ny modely sasany dia manana sensor sensor, io dia azo atokisana rehefa misy olona miditra amin'ny efitrano.
Izahay dia manidy ny tapany voalohany amin'ny lisitray amin'ny isa 13. Manentana anao mafy izahay hanome hevitra. Soraty amin'ny lisitray ireo zavatra tsy azonao. Hiara-hamorona azy isika. Mety ho lava ny lisitra… ary tsara tarehy izany!
Sary avy amin'ny Thomas Kolnowski na Unsplash
Saripika avy amin'ny Satel, Nice, Netatmo
Ny vahaolana Smart dia manana tombontsoa maro
Araka ny hitanao amin'ireo ohatra etsy ambony, ny fanodinana ny ankamaroan'ny lafiny manan-danja amin'ny fiainana an-tokantrano dia tsy olana lehibe ankehitriny. Raha ny lafiny teknolojia an-trano dia ilaina ihany ny manonona tombontsoa lehibe maro izay mitarika ny famolavolana sy fametrahana rafi-trano hendry. Ireto ny top 5!
Mpampiasa marobe no manondro fa tian'izy ireo ny hevitry ny tokantrano manan-tsaina indrindra noho ny mety hampitombo ny fahatsapan'izy ireo ny filaminana. Ny vahaolana an-trano Smart dia ahafahanao mampiditra sy manatsara ny fampandehanana ny fitaovana mahazatra mifanakalo hevitra manoloana ny fiarovana ny fananana, cameras na sensor. Androany, tsy misy olana lehibe amin'ny fifehezana ny toe-javatra any an-trano noho ny fanampian'ny fampiharana finday, eny na an'arivony kilometatra miala ny trano aza. Ny fiaraha-miasa azo atao amin'ny sampandraharaha fiarovana dia mahomby kokoa.
Ireo teknolojia toa ny sensor mihetsika miaraka amina jiro ivelany dia manakana ny asan'ny mpamaky trano ary manana fananana misakana sy misakana. Ny rafitra dia azo dinihina amin'ny sehatry ny fisorohana loza hafa, toy ny afo, ny tondra-drano na ny setroka. Ny sensor Motion dia tsy ny sensor ihany izay mendrika hampiasa vola sy hametrahana trano hendry. Vahaolana manentana ny fanahy ihany koa ny shutter roller mandeha ho azy, izay manohana ny toe-javatra tsy fisian'ny olona ao an-trano, maka tahaka ny "fiainana andavanandro" mitranga ao anaty trano foana.
Tsy tsiambaratelo fa ny angovo voatahiry noho ny teknolojia an-trano mahay. Tombontsoa lehibe ho an'ny antony roa farafahakeliny izany. Voaro aloha ny planeta. Ity lohahevitra ity dia lasa iray amin'ireo lehibe amin'ny adihevitra ampahibemaso. Amin'ny alàlan'ny fisafidianana sy fampidirana otrik'aretina elektronika dia azonao atao ny manamaivana ny fanjifana herinaratra, ary noho izany, manao hetsika ianao hampihena ny famoahana manapoizina sy ny fanjifàna tafahoatra.
Faharoa, hitanao ny fahasamihafana ao amin'ny kitapom-bolanao. Ny vahaolana Smart dia miteraka vola sasany, saingy tombony azo antoka izany fa tsy fandaniana tsy mitondra tombony. Fitaovana voafantina tsara sy voalamina tsara ary mampihena ny vidin-javatra raikitra. Ankoatr'izay, ireo fitaovana mifehy amin'ny alàlan'ny rindranasa finday dia manome aingam-panahy sy mandrisika ny fampiasam-bola amin'ny angovo. Ohatra, olona maro no manapa-kevitra ny hiditra amin'ny tontolon'ny loharanom-angovo azo havaozina ary hividy takelaka solar na pump pump. Ny ekolojia koa dia azo ampidirina ao anaty rafitra.
Ny tombontsoa lehibe amin'ny fiainana andavan'andro ao anaty trano manan-tsaina dia fampiononana fotsiny. Ny tanjon'ny automation dia ny fanamorana ny dingana sy hanesorana ireo kilasy amin'ny olona. Ny fampitomboana ny fampitaovana ny mpampiasa no tanjona voalohany amin'ny ampahany lehibe amin'ny fanavaozana ara-teknolojika. Rehefa misy olona manontany hoe: "Maninona ianao no mametraka vahaolana an-trano mahay raha tsy ilaina amin'ny fiainana?", Afaka mamaly tsotra izao tontolo izao ianao: "noho ny filanao fanararaotana!"
Ny fihetsika toa toa kely dia mitarika ny saintsika sy ny herintsika. Mandritra izany fotoana izany, ny fikarakarana ankizy sy ny ankohonana, ny fampandehanana ny asanao manokana na ny asa andavan'andro dia tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny adidy mahatsiravina sy manelingelina. Ireo singa manan-tsaina sy manokana momba ny rafitra, ohatra, ny fanokafana ny varavarana na ny vavahady, ny fametahana jiro na ny fametrahana ny mari-pana dia mahazo aina sy ny tombony lehibe.
Misy tombony lehibe mitovy amin'ny lafiny mora, izany hoe ny fotoana. Raha mihevitra ny lisitry ny fiarakodia voatanisa isika, ny jiro, ny fanaraha-maso ny tsindrona sy fanairana, fanaraha-maso ny vavahady, fanadiovana ny rivotra sy ny maro hafa dia ho hitantsika hoe hatraiza ny fotoana mahavoavonjy ny fanamafisana indray mandeha.
Alao sary an-tsaina ny tranonao manan-tsaina izay tsy handanianao minitra fitaizana sy fampidinana jamba, fanovana jiro, fanesorana loharano angovo, fandinihana ireo singa momba ny rafitra fiarovana na manatona ny vavahady. Na dia tsy mitondra fiainana miaraka amin'ny fandaharam-potoana be dia be aza ianao dia hahita hetsika mahaliana maro isan-karazany noho ireo zavatra be mpitia indrindra, izay mandray anjara lehibe amin'ny fotoananao malalaka.
Miampy lehibe izay mendrika horesahina ao anatin'ny tontolon'ny trano manan-tsaina ny toetrany manontolo. Ny fampiharana tsirairay dia tena toetra vaovao iray. Ny mety hisian'ny vahaolana ampolony maro, fa tsy ao anatin'ny tontolo ivelan'ny mpanamboatra iray ihany (e.g. Xiaomi) dia miteraka fahatsinjovana ho an'ny tena manokana.
Inona koa no azo ovaina ny teknolojia marani-tsaina. Rehefa mandeha ny fotoana dia mahita fanampiny mety hitranga ao amin'ilay rafitra ianao, tsy mitsaha-mitombo ny fahatsapana na ny fahatoniana fiarovana izay toa omena singa kely. Avy eo tsy mila mampiasa vola amin'ny fanerena ianao hatrizay. Mampiana singa amin'ny piozila voaporofo ianao, na esory ilay iray tsy ilainao intsony.
Ny teknolojia Smart an-trano dia novolavolaina na dia isan-taona isan-taona aza, fa manomboka isam-bolana. Ny lisitray momba ny zavatra 13 ho an'ny automatique dia tsy ho ela dia mila hatsangana amin'ny fitaovana hafa. Ity dia dingana tsy azo ihodivirana izay mendrika harahina hampitaovana ny tranonao amin'ireo rafitra tsara indrindra.
Apple dia manomana revolisiona amin'ny vokatra an-trano an-trano?!
paoma, revolisiona, manan-tsaina an-trano
Bloomberg dia nanambara fa miasa amin'ny fitaovana vaovao roa i Apple ao amin'ny sokajy an-trano. Ilay voalohany dia hanambatra ny fiasan'ny mpandahateny marani-tsaina, Apple TV, ary hahafahana mampiasa ny FaceTime amin'ny fitaovana iray. Faharoa ...
Smart Home aprily 2021
Jimmy, oclean, roidmi, manan-tsaina an-trano, SPC Gear, tronsmart
Tranofiara Smart Home ao amin'ny SmartMe! Aprily 2021! Amin'ity horonantsary ity dia manana unboxing 5 samihafa ho anao izahay!
Head Netatmo Smart - famerenana
loha, fanafanana manan-tsaina, netatmo, fanafanana, manan-tsaina an-trano
Nandritra ny fotoana ela dia te-hizaha loha saina izahay. Misaotra an'i Sarota PR nahazo ny fonosana fanombohana Netatmo ho an'ny fitiliana, izay misy loha roa manan-tsaina. Ka ahoana no fiasan'ny lohan'ny Netatmo manan-tsaina? Ho vakianao ao amin'ny farany ...
Vaovao somfy ao amin'ny R + T
manan-tsaina an-trano, somfy
Toy ny ankamaroan'ny foara manerantany, ny R + T dia nafindra tamin'ny tontolo virtoaly tamin'ity taona ity. Nandritra ny hetsika dia nanolotra ny marika Somfy, amin'ny endrika nomerika, incl. taranaka vaovao an'ny vondrona fanaraha-maso TaHoma, izay manolotra fampiasa maro ho an'ny ...
Xiaomi dia hifantoka amin'ny vokatra an-trano an-trano amin'ity taona ity
16 Febroary 2021
manan-tsaina an-trano, xiaomi
Lu Weibing - ny filoha lefitra sy CEO an'ny Xiaomi an'ny marika Redmi dia nanambara fa hifantoka amin'ity taona ity ny orinasa amin'ny fampidirana vokatra marobe hanampy amin'ny fandaminana trano hendry. Natolony tamin'ny alàlan'ny lampihazo io fampahalalana io ...
Nanolotra vokatra vaovao i Ring, mora vidy kokoa noho ny hafa!
3 Febroary 2021
peratra, manan-tsaina an-trano
Orinasa fanta-daza mamokatra lakolosim-baravarana marani-tsaina sy vaovao, izany hoe Ring, dia nanolotra vokatra vaovao izay antsasaky ny vidiny! Vidiny ambany, nefa amin'ny vidiny inona? Araka ny azonao an-tsaina, amin'ny vidiny ambany dia nanapahan'ireo mpanamboatra fiasa sasany. –...
Ny fampisehoana mangarahara LG dia handeha amin'ny ankamaroan'ny tanàna?
lg, manan-tsaina an-trano, mampiseho
LG dia namoaka hevitra vaovao maro. Ny iray amin'izy ireo dia ny tolo-kevitra fa ny hoavin'ny tanàna marani-tsaina dia tokony hiorina amin'ny fampisehoana OLED mangarahara. Ho an'ny vao manomboka, trano fisakafoanana? LG dia mikasa ny hampiasa fampisehoana OLED mangarahara, ankoatry ny hafa ...
Ny mari-pahaizana Smart Scale dia efa natolotra tany Polonina
manan-tsaina, manan-tsaina an-trano, mizana hendry
Vao tsy ela akory izay, naseho ny mizana Smart Scale, izay efa amidy any Polonina. Mazava ho azy fa tsy izao no farany. Izy io no laharam-pahamehana voalohany an'ny mpamokatra Realme eo amin'ny tsenan'ny Smart Home eto amintsika. Manondro ny ...
SmartThings sy Aeotec - manambatra hery
aeotec, Samsung, manan-tsaina an-trano
Hatramin'ny 2013, Samsung SmartThings dia nanjary iray amin'ireo sehatra an-trano malaza indrindra - miaraka amin'ireo mpampiasa mavitrika 63 tapitrisa. SmartThings, na izany aza, tsy mikasa ny hijoro ary hanatanteraka drafitra hanafainganana ny famoronana ekosistia misokatra ...